URobin Lee Row wabulala umyeni wakhe nabantwana ababini ukuze baqokelele kwimigaqo-inshorensi yabo yobomi.
Ngomhla ka-Februwari 10, 1992, kwaqhambuka umlilo emgodini wokuqala kwindlu apho uRobin Row owayengumyeni wakhe kunye nabantwana ababini bahlala khona. Xa abafihli bomlilo befika kwisakhiwo esivuthayo bafumanisa izidumbu zomyeni kaRobin uRayy Row, 34, kunye noonyana babo uYoshuwa, 10, noTabitha, 8. Bonke babesele bafa kwi- carbon monoxide yetyhefu .
Kwakuqinisekiswe ukuba umlilo uqaliswe kwiindawo ezimbini kumgangatho wokuqala wendlu kwaye amanzi asetyenziswe ukutshaya umlilo. Kwaye kwagqitywa ukuba ukutshintshwa kwesekethe ukuya kwi-alamu yomsi bekuqhutywe kwisithuba esiphezulu kwaye i-fan ye-furnace isetyenziselwe ukuqhubeka ngokuqhubekayo, okuza kuqhuba ukujikeleza komsi kulo lonke ifulethi.
URobin Row wayehlala nomhlobo wakhe, uJoan McHugh, ngenxa yeengxaki zomtshato. Kwiiveki ngaphambi komlilo, uRow wayexelele uMcHugh kunye nabanye abahlobo ukuba umyeni wakhe wamthumba, wadlwengulwa waza wamxhaphaza ngokwenyama kwaye wayeceba ukuqhawula umtshato.
Ngobusuku bomlilo, iRow yavusa uMcHugh ngo-3 ekuseni, yamxelela ukuba "wayenomvakalelo olubi ukuba kukho into engalunganga ekhaya." Ukuze agxilise ingqondo yakhe, uMcHugh waya neRow ukujonga indlu kunye nabantwana bakhe.
Njengoko baphendulela kwisitalato bayabona izibane zezithuthi eziphuthumayo kwaye uRow watshela uMcHugh ukuba kufuneka kube ngumlilo. Ngelo xesha, abazange babone umpu. Kwakuyi "ukuqagela" kwinqanaba leRow.
Xa befika endlwini Row baxelelwe ukuba umyeni wakhe nabantwana babeswele ngenxa yomlilo.
Ngenxa yobume bomlilo I-Row yaba ngummangali okhokelayo ekuphenyweni kwamapolisa.
Xa amapolisa aphangela imoto yakhe athola iikopi zee-inshorensi zempilo ezintandathu ezithathwa kwi-Family Row ejikeleze i-$ 276,000 kunye nokuqamba uRobin njengomxhamli opheleleyo. Umgaqo-nkqubo wangoku kutshanje wathengwa nje iintsuku ezili-17 phambi komlilo.
Kwakhona ngexesha lokukhangela, kwafumaniswa ukuba uRobin wayegxeke imali emsebenzini wakhe njengomphathi wee-bingo imidlalo kwi-YMCA. Wabanjwa, wahlawuliswa ubusela obukhulu waza wafaka entolongweni.
Uphando kwakhona lwafumanisa ukuba uRobin wayelahlekelwe ngabantwana ababini ngaphambili. Intombazana yakhe yafa ngo-1977 ukusuka kwi-Sudden Infant Death Syndrome kunye nendodana yakhe uKeith yafa ngo-1980 kwinto elalilawulwa njengomlilo wengozi.
Abaphenyi baqwalasela ukuba iingxelo zangaphambili zeRow ezenziwa nguRandy ngamanga. Kwakungenakho iingxelo zamapolisa okanye ukutyelelwa kwiinkonzo zabantwana njengoko wayemangalele. Baye bafumanisa ukuba iRow yayibandakanyekile ngokocansi noMnumzana ongudala kunabo bonke.
Ngobubungqina obukhomba kakhulu kwiRobin, abacuphi baqhubeka bephanda kwaye banxusa uncedo kumhlobo ukuba uRobin wayehlala kunye naye ngenkathi ehlukaniswe nomyeni wakhe.
Umhlobo waqala ukurekhoda iingcingo zeefowuni aze aphethwe ngabacuphi, waqamba amanga wathi kuRobin ukuba ngobusuku obomlilo wayegumbulukile waya phantsi kwaye wamangaliswa ukubona ukuba uRobin wayengekho. URobin wamxelela ukuba wayesekho emotweni, ethetha nomyeni wakhe weengqondo kuze kube ngu-4: 30 ekuseni u-Joan wacebisa uRobin ukuba atshele amapolisa ekubeni yayiza kumnika u-alibi oqinileyo ngokubhekisele kuyo ubusuku bomlilo.
Ngomhla ka-23 Matshi 1992, uRobin wabanjwa ngenxa yamanani amathathu okubulala. Ngexesha elithile uRobin wayethetha ukuba amapolisa amkholelwe.
Ukugqitywa kokugqibela koMama
NgoDisemba 16, 1993, uRobin watholakala enetyala lolwaphulo-mthetho lokubulawa kwangaphambili kwaye wagwetywa ukufa. Ngexesha lokugweba kwakhe uMgwebi u-Alan Schwartzman wambiza ngokuba ngumqambimanga wamatyala waza wathi, "Izenzo zikaRobin Row zimela ukutshatyalaliswa kokugqibela koomama kwaye zibandakanya ukuxhatshazwa kweengcamango zesimo somama," kwongezelela ukuba "ukuxhatshazwa koMama" - ukubulawa ngabantwana bakho - yindlela yokubonakalisa umbulali ongenangqanda, ongenangqondo - inzala eya kwinhliziyo ebumnyama yobumnyama. "
Okwangoku, uRobin Row nguye ohlala ejele e-Pocatello Women's Correctional Centre (PWCC) ePocatello, Idaho.
Indlela yokutyhila imiyalezo engabonakaliyo ye-Ink
Ziziphi Ezi Zinto Ezintle Ngenyanga?
Abadlali - Ukususela kuJulie Delpy ukuya kuMark Ruffalo - ngo-2016 i-Oscars Boycott
Imihla Engcwele yoxanduva kwiLatini Rite yeCawa yamaKatolika
I-Admissions yeYunivesiti yaseSushanna